One Stop Plastic Injection Isikhunta Ukukhiqiza Service
IsiShayina Kuhle Plastic Isikhunta Umkhiqizi (CBPMM) kuyinto ehamba phambili inkampani Chinese onguchwepheshe emkhakheni plastic umjovo isikhunta futhi yokukhiqiza amasevisi. Thina Kwamiswa ngo-2003 kanye nokusebenza zethu zisekelwe aphume Shanghai, China. Silandela esiqinile izinqubo izinga namazinga tekusebenta ezivuma nathi omunye engcono ehamba phambili service izinga abahlinzeki eChina.
Image Ibhokisi umbhalo
CBPMM unamathela ezindinganisweni izinga international has -ISO 9001: 2005 isitifiketi okuyinto eyabonisa izinga yethu siqinisekiso.
Sinikeza imikhiqizo okuhlukahlukene ukuze amakhasimende ngazo zihlanganisa plastic umjovo udini, udini yezimoto, plastic isikhunta making, ibhodlela cap udini, isikhunta making electronic, ufe ekubunjweni, ekhaya Imishini isikhunta, wezokwelapha isikhunta making, nogwali isikhunta making.
Sisebenzisa zakamuva kanye state-of-the-art imishini kanye ukukhiqizwa izinqubo ukuqinisekisa imikhiqizo kangcono amakhasimende ethu zenani. CBPMM kungaba akhiqize imikhiqizo nezimfuneko ethize yekhasimende futhi ungathola it zilethwe kubo ngokushesha.
Siyaziqhenya abaqeqeshiwe, abaqeqeshiwe, futhi esebenza kahle zabasebenzi bethu. Thina lekuniketa ukuhlangabezana izabelo emahoreni angu-24 futhi ungakwazi ukunikeza isampuli ka isikhunta plastic kumakhasimende ngaphakathi 3-5 izinsuku .
Iqembu lika izifundiswa CBPMM is bagogoda nilidle abaluthole ezanele ukuqonda izidingo amakhasimende emkhakheni plastic umjovo udini nokuwenza ithunyelwe phakathi amasonto amabili.
Amakhasimende bangathembela zabasebenzi bethu ezehlukile ukuhlangabezana oda zabo egcizelele ngaphakathi umnqamulajuqu esinqunyiwe.
Siphinde baqonde mncintiswano kanye sensitiveness intengo plastic isikhunta embonini futhi ngenxa yalokho, thina amanani ezimpahla zethu ngokuncintisana. Sikholelwa ekuhlinzekeni imikhiqizo eliphezulu kumakhasimende ethu ngamanani ezifanele ukwakha nokukhulisa sekukudala nabo. Ukumane yokuthengisa akuzona umgomo wethu ukhiye, kunalokho sigxila isevisi yamakhasimende ngokushesha futhi iphendule.
CBPMM uzibophezele ekuqinisekiseni ukwaneliseka ikhasimende ozokusiza ukuba silondoloze futhi sikhule amakhasimende ethu.
Izithuthi Izingxenye Isikhunta
Medical Ingxenye Isikhunta
Ipayipi Isikhunta Onengqondo
Ebhodleleni Cap Molding
Factory Amanani Original
I plastic isikhunta embonini amanani iyashesha ukuzwela. Intengo kuyinto determinant ukhiye we ukuthonya isinqumo ukuthenga yekhasimende. Siyaqonda lezi Dynamics umkhakha namandla Ngentengo ngaleyo ndlela sinikeza amanani engcono amakhasimende.
Sinikeza kubo original ifektri amanani okuyizinto yokuncintisana okukhulu kuka izimbangi. Akukona nje kuphela ukuthi imikhiqizo yethu ngempumelelo kakhulu ontengo yakhe yayinqunyiwe, kodwa nayo futhi high kakhulu. Lokhu kudala inhlanganisela ethandwa kakhulu imikhiqizo eliphezulu ontengo yakhe yayinqunyiwe ngamanani ukuncintisana kakhulu okusisiza ukuhlukanisa thina nge mncintiswano.
zamanani lwethu lusenza ethandwa phakathi amakhasimende futhi esisiza ukuba sigweme ukuphinda osekushiwo izimbangi.
CBPMM isebenzisa zakamuva kanye nemishini kanye zokukhiqiza state-of-the-art. Imishini yesimanje esetshenziswa kuqinisekisa ikhwalithi imikhiqizo yethu. Sisebenzisa eziphambili imishini efana ngesivinini yokugaya, emihlanu-eksisi machining isikhungo, kagesi osenyameni machining, CNC Umfanekiso oqoshiwe futhi umshini wokugaya, isibhamu imishini njll
Imishini yethu yakamuva kanye izinhlelo kakhulu eziphambili futhi ephumelelayo ukukhiqizwa asivumela ukukhiqiza imikhiqizo eyikhwalithi ngesikhathi okuningi elishesha . Siyaziqhenya ekuhlinzekeni isampula isikhunta plastic kumakhasimende ethu 3-5 izinsuku futhi ekuhlangabezaneni ukudiliva lokugcina imikhiqizo 2 amaviki.
Amasistimu ethu ukukhiqizwa eziphambili asisize sihlale ngaphambi mncintiswano endaweni umkhakha ukuncintisana kakhulu.
Ukuba omunye ekuholeni plastic abakhiqizi isikhunta eChina, CBPMM has a ezihlukahlukene futhi singcolile iklayenti base. Besilokhu othembekile nge amaklayenti Chinese kodwa amaklayenti emhlabeni jikelele.
Thina eliqhutshwa umgomo wokubeka kumakhasimende core yebhizinisi lethu. Yokuthengisa abaphathi ethu kahle nge-English futhi angakhuluma ngokushelelayo ngezinombolo amakhasimende ngesiNgisi.
Lokhu kunikeza amakhasimende kalula ukuxhumana ngolimi lwabo lwendabuko nathi. Kusisiza ukuba azikhandle ukuze a ebanzi kwamakhasimende base futhi sokuyokhonza ngendlela ephumelela kakhudlwana ngaleyo ndlela kuqinisekiswe wenkonzo ophumelela njengo futhi esifike ngesikhathi amakhasimende ngolimi alukhethayo.
Omkhulu Ngemva Sales Izikhungo
CBPMM bekulokhu inkampani ikhasimende-centric. Umgomo wethu akukhona nje ukuthengisa umkhiqizo ukuze ikhasimende, kunalokho ngokunikeza olungenakuqhathaniswa emva yokuthengisa service kubo futhi.
Sikholelwa ekuthuthukiseni nasekondleni eside ubudlelwano namakhasimende ethu ukuze njalo ukubuyela kithi plastic izidingo zabo isikhunta yokukhiqiza.
Zethu emva yokuthengisa ithimba inikeza isevisi ngokushesha futhi nezimo ikhasimende ku yimuphi umkhiqizo noma imibuzo ehlobene abangase babe ngemuva kokuthenga umkhiqizo wethu. Silwela ukunikeza ephelele neqondakalayo emva-sales service kumakhasimende ethu ukuze abe ukuthula okuphelele kwengqondo lapho ukuthenga imikhiqizo yethu.